Paris Gare du Nord chiteshi chechitima chabviswa pamusoro pekutyisidzira kwebhomba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » Paris Gare du Nord chiteshi chechitima chabviswa pamusoro pekutyisidzira kwebhomba
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Chiteshi chechitima cheParis Gare du Nord chaburitswa nekutyisidzira kwebhomba.
Chiteshi, chimwe cheParis chikuru, chinogamuchirawo chitima cheEurostar kubva kuLondon uye chinoshandira Charles de Gaulle Airport.
Gare du Nord ine chiteshi chechitima chabviswa nekuda kwemukwende usina kutarisirwa.
Mazana evafambi aifanira kumira kunze kwechiteshi neChitatu mushure mekunge mapurisa arayira kuti ibudiswe.
Boka reParis metro rakati traffic inotarisirwa kutangazve na5pm nguva yemuno (3pm GMT).
Mazana avanhu akamanikidzwa kumirira kunze Gare du Nord chiteshi chechitima pakati Paris nhasi mushure mekunge mapurisa arayira kuti ibudiswe, ukuwo boka remabhomba richiferefeta zvinhu zvinofungidzirwa kuti hazvina kutariswa.
The Gare du Nord, zviri pamutemo Paris-Nord, imwe yematanho matanhatu makuru echiteshi chechitima mukati Paris, yabviswa nekuda kwekutyisidzira kwebhomba uye traffic yechitima kubva kuchiteshi yakamiswa.
Transport Express Dunhu (TER) yakanyora paTwitter kuti zvifambiso kubva pachiteshi zvakakanganiswa, ukuwo kambani inomhanya neParis Metro yakataura kuti zvitima zvanga zvisiri kufamba munzira dziri pakati peParis Gare de Lyon neParis Nord.
Boka reParis metro rakati traffic yaitarisirwa kutangazve na5pm nguva yemuno (3pm GMT) uye yakasimbisa kuti chiitiko ichi chine chekuita nechinhu chemukwende usina kutarisirwa.
Chiteshi, chimwe che ParisYakakura, inogamuchirawo chitima cheEurostar kubva kuLondon uye inoshandira Charles de Gaulle Airport.
Mapikicha nemifananidzo kubva kunze kwechiteshi zvinoratidza mhomho yevanhu vakamirira mumigwagwa yeParis yechigumi yenzvimbo dzakajeka. Vamwe paTwitter vakasimbisa kuti chikwata chebhomba chasvika pachiteshi.